रमेश खरेल को’रोना सं’क्रमणका कारण गम्भीर बिरामी आइसियुमा राखेर उपचार – News543Online
May 27, 2021 adminLeaveaComment on रमेश खरेल को’रोना सं’क्रमणका कारण गम्भीर बिरामी आइसियुमा राखेर उपचार
को’रोना सं’क्रमणका कारण गम्भीर बिरामी बनेपछि करिब दुई सातायता नेपाल पुलिस अस्पतालमा उपचाररत पूर्व नायब महानिरीक्षक रमेश खरेलको स्वास्थ्यमा सामान्य सुधार आएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। उनलाई आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ।
‘अस्पताल आउनुअघि नै को’रोनाले उहाँको फोक्सोमा असर गरिसकेको थियो। त्यसैले अवस्था केही जटिल थियो। तर अहिले क्रमिक सुधार भइरहेको छ’ अस्पताल स्रोतले भन्यो। नेपाल पुलिस अस्पतालमा उपचाररत दुई जना बहालवाला डीएसपीको एक साताको अन्तरमा ज्या’न गइसकेको छ। गत साता राजकुमार केसी र सोमबार समिर खरेलले को’रोना कारण ज्या’न गु’माएका छन्।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता बसन्त कुँवरले पनि पूर्व डिआइजी खरेलको अवस्था सुधार भइरहेको बताए। ‘बीचमा निकै क्रिटिकल थियो भन्ने रिपोर्ट प्राप्त भएको थियो। मिनी भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भएको थियो। तर अहिले अवस्था सुधारोन्मुख छ’, एसएसपी कुँवरले भने
काठमाडौंमा २० जेठसम्म थपियो निषेधाज्ञा,, सहि कि गलत ? भोट गर्नुहोस
२२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बिक्रि भयो यो परेवा, आखिर के छ त्यस्तो ?
दारी बा भन्छन जिउदो मान्छेलाई मर्यो भनी समाचार बनाउनेलाई मुद्दा हाल्छु ।
पर्सि देखि फेरि बन्द:सही की गलत